भारतसँग नझुकेका प्रधानमन्त्री गोपाल खड्कासँग झुक्ने कुरै आउँदैन
२०७२ चैत २१ गते १५:४३
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् । भारतीय नाकाबन्दी खुलेको दुई महिना हुन लाग्दासमेत इन्धनको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिन्छ । ग्यासको अभावमा उपभोक्ताको चुल्हो बलेको छैन । कालोबजारीका कारण उपभोक्ताले सहजै इन्धन...
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमाथि सात आरोप
२०७२ चैत १७ गते १०:४६
गठन हुनुअघि नै डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टीबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईदेखि नयाँशक्तिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुबारे पनि बजारमा चर्चा छ । चर्चा र टिप्पणीमात्रै होइन, नयाँशक्तिलाई कटाक्ष गर्ने आरोप पनि अगाडि आएका छन् । नयाँ शक्तिका प्रवक्ता...
नेपाललाई भारतबाट भन्दा चीनबाट बढी खतरा देखिँदै छ
२०७२ चैत ९ गते १८:५६
नेपालका ‘पब्लिक’ मा चीनको इमेज राम्रो छ । तर, भारतले सबै कुरा नेपालमा बिगारिरहेको छ भन्ने सोचाइ छ । काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भर्खरै सकियो । मलाई कतिपय निर्वाचन हार्न लागेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले भने कि पार्टीभित्र कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेमा ३०...
बुद्धि नभएकाहरु हो, मैले विमान दुर्घटना रोक्ने उपाय दिँदा उल्टै जनता भड्काएको भन्छौ ?
२०७२ फागुन १७ गते १४:३१
इन्टरनेटका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका महावीर पुन म्यागेसेसे पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा योगदान दिएबापत पुनलाई सन् २००७ मा म्यागेसेसे पुरस्कार दिइएको थियो । म्याग्दीको दानामा तारा एअरको जहाज दुर्घटना भएपछि पुनले मौसमसम्बन्धी भिडियो सहितको जानकारी दिने प्रविधि प्रयोग नगरेको...
गगन थापाले विरोध गरेकै कारण मैले चुनाव जितेँ
२०७२ फागुन १४ गते १३:११
नेपाली कांग्रेस काठमाण्डु कार्यसमितिको अधिवेसनमा सभापतिमा सबुज बानिया हालै निर्वाचित हुनु भएको छ । भीमसेनदास प्रधानलाई पराजित गर्दै बानिया विजयी हुनुभएको हो । भीमसेन दासलाई पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले समर्थन गर्नुभएको थियो भने बानियालाई महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले । यसकारण पनि यसपटक काठमाण्डुको अधिवेसन...
ब्वायफ्रेन्ड छ भन्ने आमाबुबालाई थाहा छैन
२०७२ फागुन १० गते १०:१३
नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुमा नविना लामा निर्वाचित भएकी छिन् । माधव नेपाल समूहका दीपक गौतमलाई पराजित गर्दै अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पदमा आइतबार राति विजयी भएकी हुन् । नविना अविवाहीत छिन् । तर उनले आफुनो प्रेमी भएको बताएकी छिन् । विवाह प्रेमीसँगै हुने उल्लेख गर्दै काठमाण्डु...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वारपारको लडाईं सुरु गरेका छन्
२०७२ फागुन ८ गते १४:०३
२५० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था नेपालबाट हटिसकेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले राजसंस्था हटाउने गरेको निर्णयका बाबजुद अहिले पनि कतिपय मानिसहरु नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । केही राजनीतिक दलहरुले पनि नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य रहेको बताउँने गर्छन् । खारेज नै भएको...
सुशील ‘दा’लाई अस्पताल लगेको भए मलाई नै मार्थे
२०७२ माघ २९ गते १४:०८
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन धेरेकालागि अप्रत्याशीत लाग्यो । कोइराला अस्वस्थ भएको खबर नै नआई उहाँको निधनको खबर आउँदा अनौठो लाग्नु स्वभाविक पनि हो । बिरामी भएको व्यक्तिलाई अस्पताल नलैजानु भूल थियो भन्नेहरु पनि छन् । कोइरालाका निजी चिकित्सक डा. करवीरनाथ...
महाधिवेशनबाट काँग्रेस फुट्न सक्छ
२०७२ माघ २२ गते ११:३४
संसदको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवशेनको सरगर्मी बढेको छ । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका बयोवृद्ध नेता सुशील कोइराला एक कार्यकाल पुनः पार्टी प्रमुखमा दोहोरिन चाहन्छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिको दौडमा छन् । काँग्रेसलाई स्थापनाकालको...
नाकाबन्दीबारे मन्त्री अग्नी खरेललाई सोधिएको छ प्रश्न
२०७२ माघ १३ गते १२:२१
जनजीवन सहज हुने दिन प्रतीक्षा गरेको पनि धेरै भइसक्यो । मधेसी मोर्चाले नाकाको धर्ना छाडेको छैन । इन्धनदेखि खाना पकाउँने ग्यासको अभावमा जनताको दैनिकी कष्टकर छ । तर राम्रो हुने दिन गन्दा गन्दै पाँच महिना पुगिसक्यो । यो अवस्था कहिलेसम्म ? कानुन मन्त्री अग्नी...
कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपतिको फूली लगाइदिन लडेका होइनौं
२०७२ माघ १२ गते १३:५६
नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको २३ औ महाधिवेसन माघ २७, २८ र २९ गते हुँदैछ । यसपटकको महाधिवेसनमा पार्टीको गुटअनुसार विद्यार्थीमा पनि गटगत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अध्यक्षमा तीन जनाको नाम चर्चामा छ । हालका उपाध्यक्षद्वय दीपक गौतम, ऐन महर, महासचिव नविना लामाले अध्यक्ष उठने...
गोल गरेपछि जर्सी उतार्नै लागेको थिएँ तर, पहेँलो कार्ड खान्छु भनेर डराएँ
२०७२ माघ ११ गते ११:३५
बंगबनधु गोल्डकप जितेसँगै २३ वर्षपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उपाधी चुम्दा त्यसको मुख्य भूमिका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, खेलाडी नवयुग श्रेष्ठ, विमल घर्ती मगर, विशाल राई, अन्जन विष्ट, आदित्य चौधरी लगायतकाको रह्यो । नेपालले गोल खाने तर विपक्षीको पोस्टमा गोल गर्न नसकेको लामो असफलतालाई तोड्न यी सहित...
« अघिल्ला 1 …67 8910 … 18 पछिल्ला »